Maxbuus Al-shabaab Ka tirsanaa Oo Qudha ka jaray Lix Askari Oo Taliye Sare Kamid ahaa | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Maxbuus Al-shabaab Ka tirsanaa Oo Qudha ka jaray Lix Askari Oo Taliye Sare Kamid ahaa
Nairobi:(Hubaal)-Nin maxbuus ahaa oo lala xidhiidhinayo Ururka Al Shabaab, ayaa lix askari ku dilay Gobolka Waqooyi Galbeed Kenya, ka dib markii aroornimadii hore ee shalay uu qori ka fara maroojiyay askari Booliska Kenya ka tirsanaa.
Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Mwalimu Omari, ayay soo xidheen Ciidanka Booliska Kenya, ka dib markii lala xidhiidhiyey in uu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab, waxaana la soo xidhay Salaasadii, iyadoo habeen horena uu qoriga ka dafay ninkii askariga ahaa. Dhacdadan, ayaa waxay ka dhacday Saldhiga Booliska Kapenguria, waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in la khaarajiyay ninkii toogashada ka gaystay Saldhigaasi.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano (GSU), ayaa soo afjaray toogashadan, ka gadaal markii diyaarad Helicopter ahayd loogu daabulay Saldhiga.
Lixda askari ee la dilay, ayaa waxaa ku jira Taliyihii Saldhiga oo lagu magacaabi jiray Vitalis Ochido, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Booliska Kenya.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninka toogashada ka gaystay Saldhiga ay u soo gurmadeen laba nin oo qoryo ku hubeysnaa, ka hor inta aan weerarka la soo afjarin, sida ay tebinayso Warbaahinta Kenya.
Waa weerarkii ugu horeeyay oo Ururka Al Shabaab uu ka gaysto Gobolka Waqooyi Galbeed, tan iyo markii ay Ciidanka Militariga Kenya gudaha u soo galeen Gobolada Koonfurta Somaliya.
Weerarkan waxaa uu ku soo aadayaa, xilli hal habeenno ka hor uu Amiirka Ururka Al Shabaab, Sheekh Axmed Cumar (Abu Cubeydah) uu ku baaqay in Muslimiinta Kenyanka ah la dagaalaman dowladda.